भैँसेपाटीबाट बहिरङ्ग क्लिनिक सेवा शुरु « Lokpath
भैँसेपाटीबाट बहिरङ्ग क्लिनिक सेवा शुरु
काठमाडौँ – परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले ललितपुरको भैँसेपाटीबाट बहिरङ्ग क्लिनिक सेवा शुरु गरेको छ । भैँसेपाटीमा अस्पतालकै भवन भएकाले पहिलेकै बन्द भएको सेवा पुनः शुरु गरिएको हो । ललितपुर भैँसेपाटी वरपरको क्षेत्र, दक्षिणकाली ,फर्पिङलगायत सो क्षेत्रका २२ र २३ वडाका जनताले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अस्पतालको भनाइ छ ।
अस्पतालका वरिष्ठ लेखा अधिकृत चन्द्रबहादुर गुरुङले भन्नुभयो, “भैसेपाटीमा विसं २०६८ मा पनि बहिरङ्ग सेवा शुरु भई एक वर्ष चलेको थियो तर पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बन्द भयो, त्यसलाई फेरि सञ्चालन गरेका हौँ ।”
सात वर्षअघि जाउलाखेल निवासी कमलमणि दीक्षित र श्यामा दीक्षित दम्पतीले २२ आना जग्गा र त्यहाँ बनेको चार तले अत्याधुनिक भवन प्रसूति गृहलाई दान दिइ सेवा बिस्तार गर्न दिनुभएको थियो ।
शुरुआती दिनमा केही समय सेवा बिस्तार भए पनि विभिन्न कारणले नियमित गर्न नसकेपछि सेवा बन्द भएको अस्पतालका प्रशासक रानु थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त क्लिनिकबाट स्त्री, प्रसूति तथा बालरोग विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिने छ । त्यसका लागि क्लिनिकमा स्त्री, बालरोग विशेषज्ञका साथै दक्ष प्रसूतिकर्मी व्यवस्था गरिएको छ । अल्ट्रासाउण्ड, आकस्मिक प्रसूति र ल्याब सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ ।
साथै मंगलबारबाट प्रसूति गृहभित्रै बैंकिङ कारोबारका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तार गरेको छ ।
अस्पतालको प्रशासनिक कार्य, सेवाग्राही कर्मचारी, बिरामीको सहजताका लागि सेवा बिस्तार गरिएको हो ।
बैंक कार्यकारी प्रमुख ज्योति पाण्डे र अस्पतालका निर्देशक प्रा डा जागेश्वर गौतमले संयुक्तरुपमा सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको हो । बैंकले अस्पताल परिसरभित्र २४ सै घण्टा एटिएम सेवा तथा बैंकिङ कारोबार गर्नेछ । सार्वजनिक बिदाका दिन पनि सेवा बन्द नहुने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,१४,सोमवार १३:०१
काठमाडौं । तपाई कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? मानिसको उमेर, शारीरिक अवस्था, मानसिक स्थिती अनुसार निन्द्रा तलमाथी हुनसक्छ । तर विशेषज्ञले
जाडोमा मुटुको समस्या बढ्छ, यसरी जोगिऔँ
खानेकुरा मिठो लाग्ने, खाएको खानेकुरा राम्ररी पच्ने, घाम ताप्न पाइने, तात्तातो चिया, कफी र सुप खान पाउने भएर धेरैलाई जाडो
जाडोभरि तिलको लड्डु खादाँ के–के फाइदा गर्छ
डा. हेमराज कोइराला I मकर सङ्क्रान्तिमा तिलको लड्डु, तरुल, घिउ, चाकु, मुङ्गफलीको चक्की, खिचडी, बेसनको लड्डु, आदि खाने चलन छ।
फोक्सोलाई बलियो बनाउने केही योग आसन
रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुने हुनाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन र भएमा के
प्रदेश १ मा कुन जिल्लामा कति संक्रमित ?
भिजिट भिसामा खाडी र मलेसिया जान रोक लगाइयो